အခမဲ့အွန်လိုင်းဥပဒေရေးရာအကြံဥာဏ် မဟုတ်ကြဘူးဘယ်မှာကြည့်ဖို့ကိုသိသောအဖြေများအတွက်ဥပဒေရေးရာမေးခွန်းများ ကျွန်တော်ကူညီနိုင်သင်သည်ဤအတူ။ အခမဲ့အွန်လိုင်းဥပဒေကြောင်းအရတိုင်ပင်ဆွေးနွေးဖို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်နှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းများအပြားဥပဒေကြောင်းအရအခက်အခဲနှင့်မေးခွန်းများဖြစ်ပေါ်လာသော၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်နေ့စဉ်အသက်တာအတွက်အထွေထွေ။ ဥပဒေကြောင်းအရအကြံဉာဏ်သည်နှုတ်ဖြင့်ရေးထားသို့မဟုတ်တယ်လီဖုန်းစကားပြောကြားလိုင်းနှင့်ရှေ့နေများကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဥပဒေရေးရာအကူအညီအပေါ်အမျိုးမျိုးသောပြဿနာများ၏။ ၏လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်ဥပဒေကြောင်းအရတိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်း၊လိုင်းနှင့်ရှေ့နေရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်သူတို့ပူးပေါင်းပြီးနောက်ထပ်အပေါ်ရပ်တန့်သို့မဟုတ်မှာအကူအညီ၏ပုံစံအတွက်အကြံပြုချက်များ။ ဥပဒေရေးရာအကြံဥာဏ်လည်းပေးထားတဲ့အတွက်ရေးသားထားသောပုံစံကို။ ဤအမှု၌၊ရှေ့နေတို့ကိုစုဝေးစေ၊အချက်အလက်များနှင့်အပေးအဖြေအတွက်အီးမေးလ်သို့မဟုတ်စက္ကူပေါ်တွင်ပေါ်အခြေခံပြီး၊ဥပဒေကြောင်းအရအခြေခံ။ အကျိုးကျေးဇူးကားအဘယ်သို့ကနေရှာ၏အကူအညီရှေ့နေ. အဖြေကရိုးရိုးလေးပါ။ ဒါဟာကယ်တင်အချိန်နှင့်အရင်းအမြစ်များ။ သငျသညျအဘယျသို့ကြည့်ရှုမည်အနည်းငယ်နေ့ရက်ကာလအဘို့၊ထိုရှေ့နေသင်ပြောပြလိမ့်မယ်အတွက်နာရီအနည်းငယ်။ လတံ့သောအရာကိုအတွက်အောင်မြင်ရန်လအတွင်း၊ရှေ့နေနိုင်လိမ့်မည်လုပ်အပတ်အတွင်း။
အခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုရှေ့နေ သင်သိသည့်အတိုင်း၊အစဉ်အလာ၏တစ်ဥပဒေကြောင်းအရတိုင်ပင်ဆွေးနွေးသည်တစ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစည်းအဝေး။ သို့သော်အချို့သောအခြေအနေစေခြင်းငှါမအတော်လေးအဆင်ပြေများအတွက်ဖောက်သည်။ ဒီအတွက်ကြောင့်၊ကျွန်တော်တစ်ဦးကိုစတင်မိတ်ဆက်ဝန်ဆောင်မှုအသစ်-အခမဲ့အွန်လိုင်းရှေ့နေတိုင္ပင္ေ။ ကိုယ့်စုံတွဲတစ်တွဲနှိပ်ပြီးသင်အဆက်အသွယ်နှင့်အတူတစ်ဦးအရည်အချင်းပြည့်ရှေ့နေဖို့အဆင်သင့်များကိုဥပဒေကြောင်းအရအကူအညီအတွက်၊အလုပ်သမား၊ဘဏ္လုပ္ငန္း၊မိသားစု၊အမွေဥစ္စာသို့မဟုတ်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေး၊နှင့်အခြားအမြားအအ။ အကြောင်းပိုထွက်ရှာမည်အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုနှင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်. ထို့ကြောင့်၊သင်ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သောအကူအညီတောငျးကိုကနေတဆင့် သို့မဟုတ်အစားျပရန္စာပေးစာယူ၊သင်ကူညီလိမ့်မည်တကယ့်ရှေ့နေအွန်လိုင်းအထူးကုနှင့်အတူကျယ်ပြန့်အတွေ့အကြုံအတွက်အမျိုးမျိုးသောဒေသများ၏။
အခမဲ့အွန်လိုင်းဥပဒေရေးရာအကြံဥာဏ် ခေတ်သစ်လူသားသည်အသက်ရှင်ဖို့ခက်ခဲမသိဘဲသူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးကြောင့်၊အဝိဇ္ဇာ၏သူတို့ကိုဦးဆောင်ဖို့ပြင်းထန်သောအကျိုးဆက်များ။ ဟုတ်ပါတယ်၊သင်မသိဘူး။အားလုံးကိုဥပဒေမူဘောင်များ၊သို့သော်ဤဖြစ်ပါသည်အခမဲ့အွန်လိုင်းဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်ပေးတိုင်းပြည်တစ်လျှောက်လုံး။ ၏သင်တန်း၊အအကြံဥာဏ်၏ရှေ့နေများအတွက်ဦးစားပေးပေးငါတို့အားဖြင့်အချို့ငဲ့ကဏ္ဍ:ဆယ္က်ပ္၊မသန်စွမ်းလူမျိုး၊အားလုံးသောသူတို့သည်လူသမျှကိုအကြောင်းပြချက်အဘို့နိုင်ခုခံကာကွယ်ဖို့သူတို့ရဲ့အခွင့်အရေး။ ပိုပြီးမကြာသေးမီက၊ဤအမျိုးအစားထည့်သွင်းခဲ့သည်နှင့်အဆာေျ(ပြန်)။ ဒါ့အပြင်ဥပဒေကြောင်းအရတိုင်ပင်ဆွေးနွေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီကမ်းလှမ်းစစ်ရေးနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများစွာတွင်မကြာသေးမီကဖြစ်ပွားများ၏ချိုးဖောက်မှု၏သူတို့ရဲ့အခွင့်အရေး။ အချို့ကိစ္စများတွင်ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်သည့်ရှေ့နေနှင့်အတူတစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်အောင်မြင်ရန်တရားမျှတမှု၊ဥပမာအားဖြင့်၊သငျသညျတရားမဝင်ဆုံးရှုံးဖို့အခွင့်အိမ္ရာ၊ငြင်းငွေပေးချေမှုလုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့။ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနှင့်အတူရှေ့နေဖြစ်လာသင့်သအခြေခံလူ့အမူအရာ၊ကူညီစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ပိုပြီးယုံကြည်စိတ်ချ။ အားလုံးကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံသားတွေဟာပိုပြီးသတိပြုမိဥပဒေကြောင်းအရ၊ဒါကြောင့်အများကြီးလျော့နည်း။